ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကလောင်နာမည်
ဒါပေမယ့် စာ နဲ့လူ ကိုမကွဲကြဘူးလေ ..
သူက ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိချင်တဲ့သူတွေကလည်း ရှိတတ်တာပေ့ါဗျာ...
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုရင်း
နာမည်ဆိုတာ ကိုယ့်နှစ်သက်တာ နှစ်သက်
တာပါ့ပဲ ... အဲလိုတိုင်း ဆို ကျွန်တော် ဆိုက်ရေးဖြစ်မယ် မထင်ဘူး
ဒါတွေကို ဂ၇ုမစို်က်ပါနဲ့ ခင်ဗျား
ဟယ် နင်တို့ က 2010 နဲ့ ပေါင်းပြီး နှုတ်ဆက်ကြတော့မှာလား... စိတ်လေဒယ်.. နင်က စတုတ္ထ အကြိမ် ထပ်ရေးဟာ.. ဟိုကောင်ကိုလဲ ပြန်ရှင်ခိုင်းရဦးမယ်.. ငါက ဒီကေ့စ်မသိလို့ ငါ့ကိုလာအော်သလို သူ့ကိုလဲ ပြန်သေခိုင်းနေတာ ကြောင်မျိုးရ.. ဒီကောင်က တစ်ကယ့်အရေပါးကို.. ဒါပေမယ့် အရေပြားပေါ် ရောက်တဲ့ စကားကို အယားပြေလောက်သဘောထားပေါ့ဟ.. သူလဲ ပြောချင်တာ ပြောလေ... ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်နဲ့ကိုယ်ပေါ့.. ငါ့နံမည်က မမိုးယံဆိုလဲ ဖြစ်တယ်.. အင်္ဂါဟူးဆိုတာလဲ အထီးမှန်းအမမှန်းမသိဘူး.. ကဲအေးရော.. ဟိုကောင့်ကို အွန်လိုင်းတွေ့မှ ပြန်မေးရဦးမယ်... ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ
ဒီမှာ လာပြီး ငမိုးက ငါ့အတင်းတုတ်နေပါလားနော်:P
အမနာမည် မေဓာဝီ ဆိုတာလဲ ယောက်ျားနာမည်တဲ့။ ပါဠိမှာ ဣတ္ထိလိင် တို့ ပုလ္လိင်တို့ရှိတယ်လေ မေဓာဝီ ဆိုတာ ပုလ္လိင်လို့ ပြောတာ ကြားဖူးတာပဲ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ မှည့်လိုက်တော့ မိန်းမ နာမည်ဖြစ်သွားတာပဲ။
ဦးမေအောင် ဆိုတာလဲ ရှိတယ်။
ဒေါ်တင်အောင် ဆိုတာလဲ ရှိတယ်။
မေပယ်လ်က ယောက်ျားဖြစ်လို့လဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
ပညတ်တွေပဲ ဟာပဲ ဟာကို။ :)
၂၀၁၁ မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ ကြပါစို့ မောင်မျိုးရေ ... ။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေ ... ။
နှင်းဆီကို ဘယ်မည်ပေးတော့ မွှေးမပျက်ပါ။
ငါသိတဲ့ မိန်းကလေးနာမည်က Mable ပါ..
Maple က သစ်ပင်နာမည်လေ..
Maple Story ဆိုတဲ့ ဂိမ်းတောင် ရှိသေးတယ်..
ဘာ . . . .
မေပယ်လ်က အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်သွားသလား။
ဒါဆို သေချာတယ်။ မေပယ်လ်ရေ. . .
ငါ့ညီက တကယ်ကို လူ ဆန်တာပဲ။ လူ ဆိုတာ အရေပြားပါးရတယ်ကွ။ ဟိုတလောက မနိုင်းကလည်း ဒီလိုပဲ ခံစားရဖူးတယ်။ http://www.99sanay.com/2010/09/blog-post_13.html
ဒါကြောင့် အကိုတောင်မှ သွားပြီးတော့ အားပေးမိသေးတယ်။ လူပဲကွာ အရေပြားပါးမှာပေါ့။ ကြံ့ ၊ ကျွဲ ၊ ဆင် တွေကတော့ သူတို့ အရေပြားတွေက ထူတယ်ကွ။ သူတို့က တိရစ္ဆာန်တွေလေ။ လူဆိုတာ ထိခိုက်ခံစား လွယ်တာ မှားလား။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည် ထိခိုက်ခံစားနေတာ ၊ ဒါကို တမြေ့မြေ့ နဲ့ မပြီးတော့တာပဲ ဆိုးတာ။ ပြီးခဲ့တာ ထားလိုက်တော့။ ဒီလိုမျိုး အစ်ကိုလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဘာမှ ဖြစ်မနေနဲ့တော့။ အားလုံးပဲ. . ဒါကို နှစ်ဟောင်းမှာ အတွေ့အကြုံ တစ်ခု အနေနဲ့ ထားခဲ့လိုက်တော့။ နှစ်သစ်ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ မျှော်ကြည့်ရင်း လျှောက်လှမ်းကြရအောင်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေက ခေါင်းထဲ မထည့်တာအကောင်းဆုံးပါဘဲ
ဥပက္ခာပြုသင့်တာ ပြုလိုက်မှ စိတ်ချမ်းသာရမယ်..
မဟုတ်ရင် ခံစားလို့ ပြီးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး
တစ်ခုခုဆို မပြီးနိုင် မစီးနိုင်ဖြစ်နေရင် အဲဒီလူကသာ အရှုံးဘဲ...
စိတ်ထဲ ဘာမှ မထားတဲ့သူက ဘာမှ မဖြစ်တော့ရင် အေးဆေး မဟုတ်လား
အားလုံးနှစ်သစ်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေ။
ခုတော့ မေပယ်လ်က သေရွာပြန်လာပါပြီး)
ဒါပေမဲ့လဲ...ရသာချို..ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ အစားအသောက်တံဆိတ် မှည့်လို့ကောင်းပေမဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကြဘယ်မှည့်လို့ အဆင်ပြေပါ့မလဲ..
ကလျာနွဲ့နှောင်း လို့ မှည့်ထားပြီးမှ..သားက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်လာရင်..
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလျာနွဲ့နှောင်း ဆို ကြားလို့မကောင်းပါဘူး..
ဒါပေမဲ့လဲ ပြဿနာမဟုတ်တာ ခေါင်းရှုတ်ခံမနေပါနဲ့
ကြုံကြိုက်တုန်းလေး.. စာလာဖတ်မိတယ်.. ပြဿနာတွေနဲ့ တိုးနေပါပေါ့လား...း((((
ကိုယ်ကတော့ ကိုသိင်္ဂါကျော် ပဲ ခေါ်ခေါ်
မသိင်္ဂါကျော် ပဲ ခေါ်ခေါ် ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး.. :D :D
သေချာတယ် စာဖတ်သူကျွန်မတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ
ဇောက်ထိုးဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီ။ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ 
ကိုယ်ပေါ့ဟာ။ ကိုယ်နာမည်၊ ကိုယ့်သမိုင်းလေးတော့
ကိုယ့်လက်၊ ကိုယ့်ခံစားချက်လေးနဲ့ ရေးပါရစေအုန်း။
အဲဒီ မော်ဒယ်ဘိုင်းလဲ အရေခွံထူလာမှာ။
ံHAPPY NEW YEAR!!! :)
ထုံပေပေနေတာပဲ ကောင်းတယ် .. ဒီဘက်နားဝင် ဟိုဘက်နားထွက် .. အကျိုးမရှိဘူး ထင်ရင် စိတ်ထဲ အ၀င်မခံတာ အကောင်းဆုံးပဲ ..း)
နှစ်သစ်မှာ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ကြပါစေ ..း)
ဟဲ့ မေပယ် .. နင်နာမည်စီးမယ်နော် :P:P
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ အစ်ကိုရေ..။ ပို့စ်နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ကြုံတုန်း ဝင်နှုတ်ဆက်တာ။ လိမ်လိမ်မာမာနေ.......။ :-)
ကမေပယ်ရဲ့ ပို့စ်က ဂလိုလား...။သိပါဘူး...သူ့ကောင်လေး
အဲ...အဲ...ယောင်လို့ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ စိတ်ကောက်ပြီး
ပြီး စိတ်ကို မဝင်စားတာ...။ကျားလား၊မလား မသေချာရင်
လည်း ရှေ့က ကိုတွေ မတွေ တပ်မနေပဲ နာမည်အတိုင်း
ပြန်ပြောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ....:)။ကဲ ခုလို မေပယ့် အတင်း
ပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်တယ် မမကြီးမျိုးရေ....
ဘုစုခရု အဲ ဗုသုတလေး သိခွင့်ရလို့
မောင်လေးမောင်မျိုးရေ... ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ဝအောင်မြင်သော စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ... ကလောင်နာမည်ဆိုတာ ယောင်္ကျား... မိန်းမ ကန့် သတ်ဘောင်ချလို့ ရကောင်းတဲ့အရာလို့ အမတော့ မထင်မိဘူးလေ...
ယောက်ျားကလောင်နာမယ်နဲ့ စာတွေရေးခဲ့မိရင် .... လို့။